भौतिक विज्ञानको विकास कारण प्राकृतिक विनासको उपज, आज के घर के समाज, पूरै बन्दाबन्दी अवस्थामा छ । एउटा जीवाणुसँग लड्न नसकेर विश्व अक्रान्त बनेको अवस्था मानव समक्ष खडा भएको छ । भाइरसले विकासको शिखर चुम्ने र निकै वैभवशाली ठान्ने राष्ट्रहरुको समेत निन्द्रा भङ्ग गरेको छ । तर, मानव अझै आफ्नो चिन्तन परिवर्तन गर्न सकिरहेको छैन,यो संसारमा सबै प्राणीहरुको अस्तित्व रहनुपर्छ । जीवहरुले स्वतन्त्रपूर्वक उन्मुक्त वातावरणमा रमाउन र बाँच्न पाउनुपर्छ । पृथ्वी चराचुरुङ्गीलगायत सम्पूर्ण जीवहरुको साझा भूमि हो । पृथ्वीलाई विकासका नाममा मान्छेले विनास मात्र गरेन नियन्त्रण समेत ग¥यो । त्यसैले आजको विषम परिस्थिति मान्छेले निम्त्याएको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । मानव मात्रको हित सोच्ने हाम्रो दर्शनले प्रकृतिलाई हित गर्न नसकेको परिणाम हो कोरोना भाइसर (कोभिड–१९) को जन्म । आफ्नो विनास हेर्न नसकेर नै समय– समयमा ठूल्ठूला महामारी र विपत्ति हुने गर्दछन् जुन प्रकृति आफैँ निम्त्याएको हो । त्यसको भागिदार मानवजाति हुन ।
जीवन भोगाई र दीर्घायूका लागि पूर्वीय दर्शन र सभ्यता नै उत्तम सावित भएको छ । पूर्वीय सभ्यतामा प्रचलित खानपान,योग,ध्यान,साधना,तपस्या तथा प्रकृतिसँग तादाम्य हुने हरेक कार्यलाई आधुनिक विज्ञानले जुन रुपमाले संरक्षण गर्नुपर्ने हो त्यसमा चुकेको छ । विज्ञानले मान्छेलाई विलासी होइन अल्छी पनि बनायो । फलतः मान्छेको विलासी जीवनशैलीका कारण आज मानवले प्राण घातक रोगको सामना गर्नु परेको छ । यही क्रम रहिरह्यो भने अझै कति दिन, महिना,वर्ष कष्टकर जीवन भोग्नुपर्ने हो त्यो हेर्ने बाँकी नै छ ।
नेपाल पृथ्वीको भू–स्वर्ग हो । हामीले यसलाई समृद्घ बनाउन थोरै मात्र प्रयत्न गरेको भए पक्कै पनि सक्ने थियाँ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर युवा विदेश पलायन रोक्न सकेको भए मात्र पनि देशले मुहार फेथ्र्यो । विदेशी मुद्रा भित्राउने नाममा आज झण्डै एक तिहाई जनसंख्या वैदेशिक रोजगारीमा छन् । देशले आप्mना नागरिकलाई जागिरे मानसिकताभन्दा माथि उठेर उद्योग, कलकारखाना, कृषि एवं सीपमूलक व्यावसायमा आकर्षित गर्न सकेन । हरेक वर्ष ५ लाख ६० हजारभन्दा बढी युवायुवतीहरु श्रम बजारमा आउँछन् तर सरकारी एवं निजी क्षेत्रले जम्मा ६० हजारलाई पनि रोजगारी दिन सकेको अवस्था छैन । यी तथ्यांकले हाम्रो असफलता बोली रहेको छ ।
यति बेला देश पूरै बन्दावन्दीमा छ । हुने खाने र हुँदा खानेहरु सबै घर बन्दी जीवन बिताउँदै छन् । अर्थतन्त्रको अवस्था के होला त्यस सम्बन्धी अर्थविद्हरुको चासो विश्लेषण र निकास आउँला । यही अर्थतन्त्रको कारण शिक्षाको अवस्था कस्तो होला ? त्यो सबैको चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ । कुल गार्हस्त उत्पनादनको ७ प्रतिशत रुसले शिक्षामा खर्च गर्दो रहेछ, भने अरु समृद्घ राष्ट्रहरुले कति गर्छन् होला । अनि नेपालले शिक्षामा गरेको लगानी पर्याप्त छ ? हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुन नसक्नु मुख्यतः मानिसहरुको आर्थिक,सामाजिक र अस्थिर राजनीतिको कारण नै हो । जवसम्म हरेक नागरिकले आफूलाई आवश्यक पर्ने गाँस, वास, कपास तथा स्वास्थ्य जस्ता कुराहरु सुरक्षित ठान्दैन । अर्थात आधारभूत कुराहरु पूरा नहुँदासम्म शिक्षाको विषयमा सोच्न पनि सक्दैन । तसर्थ सबैभन्दा पहिले मानवको जीवनस्तर उकास्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ तबमात्र शिक्षामा सकारात्मक परिवर्तन सम्भव छ ।
नेपालको हालको तथ्याङकले के देखाउँदछ भने हरेक वर्ष कक्षा १ मा लगभग १५ लाख बालवालिका भर्ना हुन्छन् । ती बालवालिका मध्ये कक्षा १२ पढ्ने बेलासम्म आधाभन्दा वढीले विद्यालय बीचैमा छोडिसकेका हुन्छन् । यो देशमा दुई तिहाइ महिलाले बच्चाघरमै जन्माउँने र महँङ्गीका कारण ५०% विरामी अस्पताल नपुगी मर्ने गरेका छन् । दुई तिहाइको घरमा साँझको खाना पाक्दैन भने वालवालिकालाई शिक्षा कसरी दिने भन्ने ठूलो चुनैती अझै कायम छ ।
समृद्घ राष्ट्रको परिकल्पना गर्नका लागि सवैभन्दा पहिले शिक्षामा सुधार गर्न जरुरी छ । शिक्षामा सुधार गर्न नेतृत्व तहमा रहनेहरुको सोचमा परिवर्तन हुनुपर्छ । राज्यले माध्यामिक शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । शिक्षाको समुचित ब्यावस्थापन र सञ्चालन स्थानीय सरकारले गर्दाको परिणाम कस्तो हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ ।‘शिक्षा सपारे सबै सप्रन्छ , शिक्षा बिगारे सबै बिग्रन्छ’ भन्ने चिन्तन गरेर स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायले ध्यान दिए पक्कै पनि शिक्षाको स्थर राम्रो हुन्छ । शिक्षाको स्थरसँगै परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्न जरुरी छ । वर्षभरि अध्ययन गरेर ३ घण्टा परीक्षा लिंदा आउने परिणामलाई गुणस्तरीय वा गुणस्तरहिन भन्न मिल्दैन । त्यस्तो पद्घतिको परीक्षा प्रणालीले विद्यार्र्थीले आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई मूल्याङ्कन गर्न सक्दैन ।
विद्यार्थीलाई मानव वनाउन र उसमा अन्तरनिहित प्रतिभालाई प्रष्फुटन गर्न शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै सुधार गर्न जरुरी छ । घर,समाज र माटो चिन्ने अनुशासन युक्त जीवन जिउने, संस्कार युक्त शिक्षा, सीपमूलक शिक्षा,आजको आवश्यकता हो । राज्यले सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षकको उचित व्यवस्थापन साथै भौतिक पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी गर्न सक्नुपर्दछ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरुमा अहिले लगभग ३०% विद्यार्र्थी अध्ययन गर्दछन् । सहरी क्षेत्रमा लगभग ८०% विद्यार्थीहरु संस्थागत विद्यालयहरुमा अध्ययनरत छन् । त्यसो हुँदा निजी क्षेत्रलाई पनि समेट्दै अगाडि बढेको खण्डमा यो देशका विद्यार्थीहरु पनि विश्व बजारमा सुविधा सम्पन्न विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरुसँग खरो रुपमा प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्दछन् ।
यो पवित्र भूमिमा जन्मिएका वालबालिकालाई उचित शिक्षा दिन सकियो भने समृद्घ नेपालको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । प्रकृति र विज्ञान वीचको संम्वन्ध के हो भन्ने कुरा सिकाउन अव ढिला गर्न हुदैन । पूर्वजको विरासत यो भ–ूस्वर्ग जोगाउन किताबी ज्ञानले मात्र पुग्दैन । पूर्वीय दर्शनले देखाएका मार्गमा पदचाप राख्न सक्ने हुनुपर्दछ । तबमात्र कुनै विपत्तिको सामना गर्नु पर्ने छैन । अन्त्यमा रुसोको प्रकितितर्फ भन्ने सिद्घान्तलाई अङ्गीकार गरी पूर्वीय दर्शनलाई आत्मसाथ गर्नु जरुरी छ । जसले गर्दा मानवलाई ब्यवहारिक बन्न र प्रकृतिअनुसार जीवन जीउन सहज हुन्छ । फलतः प्राकृतिक विपत्ति निम्तिने सम्भावना कम हुन्छ । साथै प्राकृति विपत्तिलाई टार्न मान्छे सक्षम बन्दछ । त्यसैले प्रकृति र माटो सुहाउँदो जीवन उपयोगी शिक्षा भए मात्र जीवन सरल, सहज एवं.सार्थक बन्न सक्छ ।
पराजुली एन प्याब्सन काठमाडौंका पूर्व अध्यक्ष हुन् ।
प्रकाशित २९ बैशाख २0७७ , सोमवार | 2020-05-11 09:31:23